खुट्टा ताछेर जुत्ता लगाउने | eAdarsha.com
खुट्टा ताछेर जुत्ता लगाउने
१. सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसमा एकता गर्ने घोषणा गरेको धेरै लामो समय भएको छ। ती पार्टीका नेताहरुले एकता गर्नका लागि धेरै श्रम, शक्ति र विचार खर्चेका छन्। केही नेताहरुले त्यसका लागि अथक प्रयास पनि गरेका छन्। तैपनि एकता हुन सकिरहेको छैन।
२. नेताहरुले शुरुमा चुनावको लगत्तै एकता हुन्छ भनेर सजिलै भनेका थिए । एकताका लागि गठित विभिन्न समितिले आआफ्नो काम तैयार गरेपछि एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “वान टु वान” बस्नासाथ कुरा मिलिहाल्छ भनिएको थियो।
३. ती शीर्ष नेताहरु वान टु वान पनि धेरै पटक बसिसके। प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानुपूर्व नै पार्टीएकता गर्ने पक्षमा थिए। त्यसको लागि विभिन्न चरणमा दुवै पक्षका नेताहरुको बैठक र संयुक्त बैठक आदि पनि भए। तर प्रधानमन्त्रीले एकता गरेर भारत जाने जुन विचार गरेका थिए, त्यो पूरा भएन।
४. त्यसपछि तिनीहरुले एकता गर्न सबभन्दा राम्रो दिन लेनिन दिवस सम्झे। वैशाख ९ गते लेनिन दिवसमा एकता घोषणा गर्ने तैयारी पनि गरिएको थियो। पार्टीका नेता एवम् कार्यकर्ताहरु उत्साही पनि भएका थिए। त्यस दिन पनि पार्टीएकता भएन। त्यस दिन पार्टीएकता नभए पनि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले एउटै मञ्चबाट पार्टीएकता हुन्छ भन्ने कुरामा सबैलाई आश्वस्त पारे।
५. त्यसरी आश्वस्त पार्ने क्रममा उनीहरुले एकता रोक्नुपर्ने कारण छैन। एकता रोक्ने के ले, रोक्न सक्ने ठाउँ केही पनि छैन भन्नेमा दृढता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले यति समय भने कि जुत्ता मिलेन भन्ने हैन, खुट्टा ताछेर पनि जुत्ता लगाउनु पर्ने विन्दुमा आफूहरु पुगिसकेको स्पष्टोक्ति दिए।
६. त्यो स्पष्टोक्ति पछि एकता गर्नका लागि नेताहरु के कति बाध्य भएका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। अब एकता हुन्छ, यसमा कसैले सन्देह र शंका नगरे हुन्छ। यस सम्बन्धमा बरु एउटा चर्चा के हुन थालेको छ भने खुट्टालाई ठीक नहुने जुत्ता कसले अर्डर गर्‍यो, कहाँबाट र कसले ल्यायो, त्यो रहस्यमयी भएको छ।
७. जुत्ता लगाउन खुट्टा ताछ्नु पर्ने घटना विश्वमा अन्यत्र शायद हुँदैन। खुट्टा ताछ्नुपर्ने निक्यौर्ल भएपछि अब ढिलो गर्नु हुँदैन। खुट्टा ताछेर नयाँ जुत्ता लगाउनै पर्दछ। नयाँ जुत्ता लगाएर सबैलाई देखाउनै पर्दछ। पार्टीएकताको स्थिति त्यहाँसम्म पुगेकोले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। छिट्टै एकता घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।